Madaxweynaha Turkiga Oo Xadhiga Ka Jaray Masaajidka Ugu Wayn Dalkaas Oo Dawladiisu Dhistay. – somalilandtoday.com
(SLT-Istanbul)Masjidka ugu weyn waddanka Turkiga ayaa maanta loo dabaaldegay furitaankiisa xaflad ka dhacday magaalada Istanbul oo uu ka qayb galay madaxweyne Racep Tayyip Erdogan.
Masjidka Camlica oo leh 6 munaaradood waxaa markiiba ku tukan karaa 6000 oo qof, wuxuuna ku yaalla meel buur dusheeda ah oo ku taalla qaybta Asia ee magaalada Istanbul.
Masjidka Camlica ayaa soo bandhigaya kaalinta rasmiga ah ee Turkiga uu caalamka uga jiro iyo kaalinta Madaxweynaha islaamiga ah ee Racep Tayyip Erdogan.
Afar kamid ah lixda minaaradood ee masjidka uu leyahay ayaa dheeririkoodu yahay 107.1 miitar taas oo loogu xusayo guusha milatari ee Seljuk sannadkii 1071-dii oo uu Turkiga ka adkaaday ciddamadii boqortooyaddii Krishtaanka ee Byzantine taas oo sare u qaaday awooddii Turkiga ee aheyd in uu maamulo Gacanka Anatolia.
Masjidkan oo lagu dhisay boqol malyan oo doolar ayaa kamid ah mashaaricda waaweyn ee uu gacan ka geystay madaxweyne Erdogan iyadoo ay aad u soo dhaweyn doonan muslimiinta Turkiga oo isaga aad u taageero balse qolyaha isaga kasoo horjeedo ayaa tallaabadan ku tilmaamay in lacagta dadweynaha si khaldan loo khasaariyay.